Kabarin'Andriamatoa Praiminisitra | Primature
19 juillet 2019 30 mars 2021
Kabarin’Andriamatoa Praiminisitra nandritra ny fankalazana ny faha-71 taona nitsingerenan’ny nitifiran’ireo mpanjanantany ny maherifon’ny Malagasy nitaky ny fahaleovantenan’i Madagasikara
Mahatsiaro tokoa ireo maherifon’ny firenena isika anio, mendrika fisaorana lalandava ireo martioran’ny Malagasy, izay nampiseho tamin’izany vanin’andro izany fa tsy nekena ho sandaina vola na voninahitra na inona na inona ny tanindrazana. Reharehan’ny Malagasy izy ireo, satria môdely teo amin’ny fitiavana tanindrazana sy ny famelana mamy ary nametraka lova tsara ho an’ny taranaka aty aoriana.
Ny ady natao tamin’ny mpanjanaka dia mbola tsy vita hatramin’izao, satria niova endrika fotsiny izany fanjanahana izany amin’izao vanin’andro iainantsika izao. Ny fahantrana mahazo ny Malagasy dia azontsika itarafana amin’ny fomba tsotra fa mbola tsy tomombana tokoa ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Ka izany indrindra no mahatonga ny mpandinika mametraka ny fanontaniana hoe : mby aiza ary toy inona no mba tombony amin’ny famerimberenana ny taom-pahatsiarovana tahaka izao anio izao ?
Ny vanin’andro sy ny tantara maro niseho tamin’ny fiainan’ny firenentsika dia nahatsapana fa nitsiry ny afom-pitiavan-tanindrazana ary mitoetra hatrany ao am-pon’ny Malagasy tsirairay. Naverintsika izany, vao tsy ela akory, tamin’ny sehatry ny baolina kitra, saingy mila mpitarika maro tonga saina isika, mila mpanentana, izay hampirehitra hatrany, hikolokolo, hampiredareda ny afom-pitiavan-tanindrazana ao anatin’ny tsirairay, mba hanandratantsika lalandava ny hasim-pirenena sy ny hambopom-pitiavan-tanindrazana. Ka ny tompon’andraikitra rehetra, na inona na inona izany andraikitra sy adidiny izany, na aiza na aiza toerana anatanterahany azy, dia tokony hanana fandavan-tena ho fanompoana ny firenena iombonana.
Ary ny vahoaka Malagasy dia ho entanin’izany afom-pitiavana izany ihany koa, mba hamerenantsika sy hanamafisantsika hatrany ny fifampitokisana sy ny fifamenoana eo amin’ny mpitondra isan-tsokajiny sy ny vahoaka. Izany fifampitokisana sy fifamenoana izany, dia mba ho soatoavina mampitambatra ary hanetsika ny ezaka hanatanterahantsika ny fampandrosoana ny firenena sy ho fanandratana ny fahamasinan’ny tanindrazana mba hiadanan’ny tsirairay.
Mankasitraka Tompokolahy, misaotra Tompokovavy
← Visite d’adieu de l’Ambassadeur de France à Mahazoarivo
Fidinan’ny Praiminisitra nijery ny zava-misy tao Toamasina →